साफ च्याम्पियनसिप: प्रिय प्रतिद्वन्द्वी भुटानमाथि जित- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २२, २०७५ हिमेशरत्न बज्राचार्य
ढाका — नेपालले भुटानको सामना गर्दा यति धेरै तनाव कहिले पनि महसुस गरेको थिएन । नेपाललाई डर थियो, कतै साफ च्याम्पियनसिप फुटबल २०१८ मा नेपालले भुटानविरुद्ध कुनै अकल्पनीय नतिजा आत्मसात गर्ने त होइन ?
तर जति बेला यी दुई टिमबीचको खेल सकियो, नतिजा नेपालको पक्षमा रह्यो, त्यो पनि ४ गोल अन्तरको । र, यससँगै प्रमाणित भएको छ, नेपालका लागि भुटान किन प्रिय प्रतिद्वन्द्वी हो भनेर । नेपालले अहिलेसम्म कहिल्यै भुटानविरुद्ध हारमात्र होइन, बराबरी पनि बेहोर्नुपरेको छैन ।
नेपालले बिहीबार प्राप्त जितसँगै भुटानमाथि लगातार १३ औं जित पनि दर्ता गरेको छ ।
यो जित किन पनि सुखद रह्यो भने यसले अब नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने समीकरण फेरि जीवन्त भएको छ । फेरि यो खेललाई धेरै अरू कारणले पनि सम्झिने छ ।
यसमा प्रमुख कारण रहनेछ, कप्तान विराज महर्जनको नेपालका लागि सर्वाधिक ६९ आैं पल्ट खेलेको कीर्तिमान । यससँगै उनले पूर्वकप्तान राजुकाजी शाक्यको नाममा रहेको ६८ क्यापको उपलब्धि पनि उछिनेका छन् ।
समूह ‘ए’ कै अर्को खेलमा बंगलादेशले पाकिस्तानलाई १–० ले हरायो । यस नतिजाले सेमिफाइनल पुग्ने दुई टिमको निर्णय खुला भएको छ । बंगलादेश ६ अंकसहित शीर्षस्थानमा छ । उसको पनि अन्तिम चार पुग्ने सम्भावना निश्चित भएको छैन ।
नेपाल र पाकिस्तान ३–३ अंकमा छन् । अब अन्तिम लिग चरणको खेलमा पाकिस्तानले भुटान र बंगलादेशले नेपालको सामना गर्नेछन् । भुटान भने २ हारसँगै बाहिरिने संघारमा पुगेको छ ।
गोलपछि खुसी साट्दै नेपाली खेलाडी  ।
भुटान भनेपछि मानसिक बलियो
साँच्चै भुटान भनेपछि नेपाल किन विजयी रहन्छ ? यसमा नेपाली टोलीका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनको प्रतिक्रिया छ, ‘भुटान भनेपछि सायद हामी मानसिक रूपमा बलियो हुन्छौं । भुटानी फुटबलले पछिल्लो समय प्रगति गरेको सुनेको छु । तर अझै पनि भुटानको फुटबल हाम्रो स्तरमा आइपुगेको छैन ।’
खेलबारे भने उनको प्रतिक्रिया थियो, यो खेल जित्नैपर्ने थियो, त्यसैले जितका लागि खेलियो । उनले आफ्ना तीन प्रमुख खेलाडी विराज, भरत खवास र नवयुग श्रेष्ठलाई बेन्चमा राखेर खेलाउने जोखिम उठाएका थिए ।
‘टिमका लागि नाम ठूलो होइन, हाम्रा लागि सबै समान खेलाडी हुन्,’ उनले भने, ‘आज जित्नैपर्ने हुनाले त्यसैअनुसार रणनीति बनायौं । टिमले त्यसैअनुसार खेल्यो पनि । पाकिस्तानविरुद्धका भूल आजको खेलमा खेलाडीले दोहोर्‍याएनन् ।’ महर्जनले टिमको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि गोलरक्षक किरण चेम्जोङलाई दिए । उनले नेपाली टिमको नेतृत्व गरेको यो पहिलोपल्ट हो । उनले यसअघि एसियाली खेलकुदमा पनि यू–२३ टिमको कप्तानी गरेका थिए ।
सुनील बल (९) बल अगाडि बढाउँदै ।
नयाँ नायक सुनील
नेपालले गरेको ४ गोलमध्ये दुईमा सुनील बलले सहयोगी भूमिका निभाए भने एक गोल आफैंले गरे । एन्फा एकेडेमीका उत्पादन सुनीलले भुटानविरुद्ध तेस्रो क्याप मात्र जितेनन्,
आफ्नो खेलजीवनकै सबैभन्दा सम्झनलायक खेल खेले ।
पहिलो ‘स्टार्टिङ लाइनअप’ मा अवसर पाएका सुनीलले यस्तो खेलका लागि कल्पना गरेको बताए । ‘आज मैले मौका पाए र त्यसलाई सदुपयोग गरें । आउने दिनमा यस्तो अवसर पाएँ भने अझ राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछुं ।’
नेपालले २१ औं मिनेटमा गोल गरेको थियो । सुनीलको कर्नरमा अनन्त तामाङले हेडबाट सजिलै गोल गरे । राष्ट्रिय टोलीका लागि अनन्तको यो दोस्रो गोल रह्यो । दोस्रो गोल ७० औं मिनेटमा सम्भव भयो, जति बेला सुनीलले पेनाल्टीमा भुटानी गोलरक्षक छिरिङ डेन्डुपले राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न नसकेको बललाई पोस्टको दिशा दिए । डेन्डुपले विमल घर्तीमगरको पेनाल्टी रोके पनि त्यसलाई राम्रोसँग नियन्त्रणमा लिन सकेनन् । तेस्रो गोल भने ७९ औं मिनेटमा भयो र यो भरत खसासको व्यक्तिगत उत्कृष्ट गोल रह्यो ।
लगभग मध्यभागबाट बल अगाडि बढाउँदै उनले नेपालका लागि दसौं व्यक्तिगत गोल गरे । नीराजन खड्काले हेडबाट गरेको ८८ औं मिनेटमा फेरि एकपल्ट सुनीलले नै कर्नरबाट पास उपलब्ध गराए । नीराजनको पनि यो नेपालका लागि पहिलो व्यक्तिगत गोल हो ।
टिममा पाँच वर्षपछि फर्केका नीराजनले आफ्नो चयनलाई सही साबित गरे । अर्कोतर्फ ८४ औं मिनेटमा वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा विराजले भने, ‘व्यक्तिगत उपलब्धिमा म खुसी छुं, तर मेरा लागि टिमको जित अझ महत्त्वपूर्ण छ ।’
फिक्का फिक्का खेल
नेपालविरुद्धको हारमा सबैभन्दा निराश रहे भुटानी प्रशिक्षक ट्ेरभर मोर्गन । खेलबाट उनको एक वाक्यको प्रतिक्रिया थियो, ‘नेपाल आज ४ गोलले विजयी रह्यो, योबाहेक खेलको अर्को प्रतिक्रिया हुन सक्दैन ।’ अनि यसको कारण ? उनले भने, ‘सायद हामीले यति माथिल्लो स्तरमा खेल्न पाएका थिएनौं कि ?’
भुटानको हारको सबैभन्दा प्रमुख कारण १० खेलाडीमा सीमित रहनु पनि रह्यो । दोहोरो पहेँलो कार्डसँगै निमा वाङ्दी ६९ औं मिनेटमा मैदान छाड्न बाध्य रहे । उनले नै नीराजनलाई फाउल गरेर नेपाललाई पेनाल्टीको अवसर दिएका थिए ।
नेपाली टिम : किरण चेम्जोङ लिम्बु, अनन्त तामाङ, आदित्य चौधरी, विशाल राई (नीराजन खड्का ६३), सुनील बल, विमल घर्तीमगर, अन्जन विष्ट (भरत खवास ७६), सुजल श्रेष्ठ, दिनेश राजवंशी (विराज महर्जन ८४), रोहित चन्द र सुमन अर्याल ।
बंगलादेश २ २ – – ३–० ६
नेपाल २ १ – १ ५–२ ३
पाकिस्तान २ १ – १ २–२ ३
भुटान २ – – २ ०–६ ०
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:०७
न्युयोर्क — दुईपल्टका विजेता नोभाक जोकोभिचले अस्ट्रेलियन जोन मिल्म्यानलाई पराजित गर्दै यूएस ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन् ।
५५ औं वरीयताका अस्ट्रेलियन मिल्म्यानको जादुमयी यात्रा टुंग्याएका जोकोभिचले अब जापानी केई निसिकोरीको सामना गर्नेछन् ।
विम्बल्डनको उपाधि जितेर ५४ साता लामो उपाधिको खडेरी तोडेका जोकोभिचले अस्ट्रेलियन मिल्म्यानलाई ६–३, ६–४, ६–४ ले पराजित गरे । पछिल्लो ११ सहभागितामा जोकोभिच ११ औं पटक सेमिफाइनल पुगेका हुन् । उनले सन् २०११ र २०१५ मा उपाधि नै जितेका थिए । मिल्म्यानले चौथो चरणको खेलमा रोजर फेडेररलाई पराजित गरेका थिए ।
जोकोभिचविरुद्ध पनि कडा परिश्रम गरेका उनले खेललाई २ घण्टा ४९ मिनेटसम्म लम्ब्याएका थिए । ‘निकै कडा परिश्रम गर्नुपर्‍यो,’ खेलपछि जोकोभिचले भने, ‘मिल्म्यानले निकै थकाएर खेल्छन् र हरेक अंक जिताउन कसरत गराउँछन् । उनले आफैं पनि धेरै बल छुटाउँदैनन् र दायाँबायाँ कुदिरहन सक्छन् ।’
यस्तै २१ औं वरीयताका निसिकोरीले मारिन सिलिचलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाए । सन् २०१४ को फाइनलमा सिलिचसँग पराजित भएका निसिकोरीले २–६, ६–४, ७–६ (७/५), ६–४ को सेटमा जित दर्ता गरेका हुन् ।
अघिल्लो वर्ष हत्केलाको चोटका कारण प्रतियोगिता गुमाएका निसिकोरीले यसपालि राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् । उनीसँगै महिलातर्फ जापानकी नाओमी ओसाकाले पनि सेमिफाइनलमा स्थान बनाएकी छन् ।
ग्रान्डस्लामको एकै संस्करणमा दुई जापानी खेलाडी सेमिफाइनल पुगेको यो पहिलोपल्ट हो । सन् २०१४ मा निसिकोरी तत्कालीन नम्बर एक जोकोभिचलाई पराजित गर्दै ग्रान्डस्लामको फाइनल पुग्ने पहिलो एसियाली खेलाडी बनेका थिए । त्यसयता भने उनले फाइनल यात्रा तय गरेका छैनन् । सन् २०१६ मा पनि उनी यूएस ओपनको सेमिफाइनलमा रोकिएका थिए । त्यतिबेला सिलिचसँगको खेल ४ घण्टा ८ मिनेट चलेको थियो ।
‘मलाई थाहा छैन तर सिलिचसँगको खेल सधैं चुनौतीपूर्ण हुने गर्दछ,’ क्रोएसियाली खेलाडीविरुद्ध आफ्नो रेकर्ड ९ जित र ६ हार बनाएका जापानी निसिकोरीले भने । ‘म हरेक अंकका लागि संघर्ष गर्छु । विशेषगरी अन्त्यतिर मैले हरेक अंकका लागि ध्यान दिएको हुन्छु । आशा छ अर्कोपल्ट खेल पाँचाैं सेटसम्म पुग्ने छैन,’ उनले थपे ।
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:०५